Boorama ilaa Tuka-raq! [Faallo kooban]
Monday July 09, 2018 - 05:47:57 in Wararka by Super Admin
Axmed Ismail Samatar oo Reer Boorama ah ayaa dadka aad ula yaaban-yihiin ujeedkiisa Tuka-raq oo ah doolal aan loo meel dayin! dadka ayaa leh Ninka Samaroon ee Luhaya ilaa Boorama ka soo Sadcaalay maxay-tahay sababta ku kalifaysa inuu isku soo sawiro
Axmed Ismail Samatar oo Reer Boorama ah ayaa dadka aad ula yaaban-yihiin ujeedkiisa Tuka-raq oo ah doolal aan loo meel dayin! dadka ayaa leh Ninka Samaroon ee Luhaya ilaa Boorama ka soo Sadcaalay maxay-tahay sababta ku kalifaysa inuu isku soo sawiro tuka-raq!
Bahasha Sagaarada la yidhaahdo baa waxa la yidhi Saaladeeda/Xaarkeeday hal meel ku tuumisaa ama ku ururisaa, iyadoo rabta inuu ku turun-turoodo Maroodi ay daanno-godobeed kala gaadhey, Aano iyo Utumona Kala dhex yaallaan sidaas na kaga aarsato!
Sagaaro Cadaawad na muujisay, Saalo la tuumiyaase Maroodi waxba yeeli weyday!.
-Talo xumo daraadeed
-Atoor tuumi Saalada
-Haku turun-turooduu is yidhi